Diyopost.com :: चितवनको स्थानिय तहको बजेट ७ अर्बको हाराहारिमा चितवनको स्थानिय तहको बजेट ७ अर्बको हाराहारिमा - Diyopost.com
चितवन, ११ असार । चितवनका ६ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ६ अर्ब ७१ करोड ६६ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
महानगर र नगरपालिकाका सबैले बजेट प्रस्तुत गरेपनि इच्छाकामना गाउँपालिकाले आइतबार औपचारिक रुपमा बजेट घोषणा गर्न भने सकेन । गाउँपालिकाको बजेट ३५ करोडको हाराहारीमा रहेपनि प्रस्तुत गर्न भने बाँकी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले जानकारी दिईन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ८७ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमसहित कूल ३ अर्ब ३४ करोड ५ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाहद्वारा प्रस्तुत बजेटअनुसार चालू खर्चतर्फ १ अर्ब ७० करोड र ४९ लाख रहेको छ भने पूँजिगत खर्चतर्फ १ अर्ब ६२ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ करोड रहेको छ ।
रत्ननगर नगरपालिकाले ५१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमसहित आगामी वर्षका लागि ८४ करोड ५४ लाखको बजेट पारित गरेको छ जसमा आन्तरिक आय १० करोड ५८ लाख, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम १२ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान २६ करोड ७८ लाख, वित्तीय सामान्यीकरणतर्फ १२ करोड २ लाख तथा राजस्व बाँडफाँडतर्फ ९ करोड ५० लाखको बजेट रहेको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान ४ करोड ९६ लाख, वित्तीय सामान्यीकरणतर्फ ९० लाख र राजस्व बाँडफाँडमा १ करोड, सडक बोर्डबाट ७० लाख एलजी सिडिपी कार्यक्रमतर्फ १० लाख बजेट राखिएको छ ।
खैरहनी नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ६२ करोड ३१ लाख ९१ हजारको बजेट ल्याएको नगरप्रमुख लालमणि चौधरीले जानकारी दिए ।
यता, राप्ती नगरपालिकाले भने आगामी वर्षका लागि ५१ करोड २० लाखको बजेट पारित गरेको छ । आन्तरिक आम्दानी ४ करोडसहित सशर्त अनुदान झण्डै २० करोड, राजस्व बाँडफाँडतर्फ झण्डै ११ करोड, सामान्यीकरणतर्फ साढे १६ करोडको बजेट पारित भएको छ ।
कालिका नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि ४९ करोड १८ लाख ६२ हजार बराबरको आयव्यय प्रस्तुत गरेको छ ।
सो बजेटमा आम्दानीतर्फ आन्तरिक राजश्व २ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान १४ करोड २६ लाख, सामान्यीकरण अनुदान १३ करोड ५७ लाख, प्रदेशसभाबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ८२ लाख ३१ हजार र सामान्यीकरण अनुदान २ करोड ५५ लाख ९३ हजार रहेको छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड ८ करोड ६७ लाख ३८ हजार, शान्ति सुरक्षा भत्ता अनुदान ७ करोड र सडक बोर्डबाट प्राप्त हुने अनुदान ३० लाख रहेको छ ।
माडी नगरपालिकाले भने ९० करोड ३८ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैशीले नेपाल सरकारबाट ३० करोड, प्रदेश सरकारबाट २ करोड, आन्तरिक आम्दानी करिव २० करोड बजेट बेहोरिने जानकारी दिए ।
अन्य रकम भने विभिन्न ठाउँबाट अनुदानित कार्यक्रमहरु आउने अनुमानसहित ९० करोड ३८ लाखको बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए ।
बुढीगण्डकीमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपः उर्जामन्त्री पुनको रुची नहुदानहुँदै गेजुवालाई नै ठेक्काको जिम्मेवारी !
काठमाडौं, असोज ८ । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रतिष्पर्धाको आधारमा उपयुक्त मोडलबाट बनाउने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ...
यस्तो आयो नयाँ भाडादर, कहाँको भाडा कति (भाडासुचीसहित)
काठमाडौं, ७ असोज । सरकारले सार्वजनिक भाडामा १० प्रतिशत बृद्धि गरेपछि नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ भाडादर अनुसार ...
काठमाडौँ, ७ असोज, धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्य सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर कारोवार ...
तल्लो मोदीको उत्पादन दशैँअघि !
कुश्मा, असोज ७ । पर्वत जिल्लामा निर्माण भइरहेको तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाले दशैँअघि उत्पादन शुरु गर्ने बताएको छ । २० ...
सरकारी कर्मचारीहरु दाताको सहयोगमा पालैपालो विदेश भ्रमणमा !
काठमाडौं, असोज ७ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी आफुअनुकुल दातको खोजी गर्दै विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् । उनीहरु ...